Apple inodhinda rwendo rwakatungamirwa nenhau dzeiyo nyowani iPhone 13 | IPhone nhau
Apple inodhinda rwendo rwakatungamirwa nenhau dzeiyo nyowani iPhone 13
Ngirozi Gonzalez | 18/09/2021 13:16 | iPhone 13, Noticias
Kugadziriswa kweiyo nyowani iPhone 13 kwakatanga Nhasi uye musi waSeptember 24, zvikamu zvekutanga zvichatanga kusvika kune varidzi vazvo. Apple yasarudza mafoni matsva anofambiswa neiyo nyowani yeA15 Bionic chip uye akagadzirisazve makamera anokwanisa kurekodha mavhidhiyo muProRes uye kunyangwe kurekodha smart mapfuti nekusiyanisa iwo asina kujeka neayo Cinema modhi. Kunyangwe hazvo nyaya dzese dzichinyatsotsanangurwa uye kugadziridzwa pawebhusaiti yepamutemo, Apple yakaburitsa vhidhiyo nyowani muchimiro cherwendo rwakatungamirwa runoratidzira makuru makuru eiyo iPhone 13.
Iwo makuru matsva eiyo iPhone 13 anoonekwa mune Apple inotungamirwa rwendo
Mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi uye kuti Apple anoziva nemusoro. Ndokusaka iwe wakatumira a Yekutungamira kushanya kuratidza izvo zvitsva mu iPhone 13 uye iPhone 13 Pro mune ayo ese mamodheru. Muvhidhiyo yese tinogona kuona kuti hunhu hwezvigadzirwa hunounzwa sei kutora matanho. Iwe unogona kuona iyo Cinema modhi muchiita, mienzaniso umo kuramba kweiyo iPhone 13 kunoedzwa kana mienzaniso yekushanda kwemakamera matsva.
iPhone 13 uye iPhone 13 Mini, tinokuudza zvese zvese
Muchokwadi, iko kushanya kwakakamurwa kuita sumo yehunyanzvi maratidziro emhando ina dziripo. Tevere, isu tinoenderera mberi nekuratidzira mashandiro eCinema modhi uye kutarisa kuomarara kwechigadzirwa uye kuramba kwemvura. Shure kwaizvozvo, iyo nyowani Super Retina XDR skrini inosimbiswa uye kuzvitonga kwemabhatiri kunoongororwa. Uye, pakupedzisira, iwe unowana chikamu chemifananidzo mune iyo masitayera emifananidzo, zoom yedhijitari uye Macro modhi yeiyo iPhone 13 Pro inomira.
Iyi inzira inonakidza kubva kuApple kuunza iPhone 13 specs padyo nevashandisi Nenzira yeiyo inoshanda uye inotungamirwa vhidhiyo apo vashandisi uye mushandi weiyo Big Apple vanogona kuonekwa vachitungamira basa. Zvichida kuti mune ramangwana michina tichaona zvakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Apple inodhinda rwendo rwakatungamirwa nenhau dzeiyo nyowani iPhone 13
Iyo nyowani A15 Bionic chip muiyo iPad mini inogumira musimba
Overcast inogamuchira widgets uye inowedzera mashandiro matsva eCarPlay